Guddiga Doorashooyinka Puntland oo qaaday Imtixaanka Saddex Boos [Sawirro] – TPEC
Guddiga Doorashooyinka Puntland, ayaa maanta xarunta dhexe ee TPEC ku leedahay magaalada Garoowe ku qaaday Imtixaanka saddex Boos oo ay soo codsadeen dad gaaraya Boqol Qof.
Boosaskan oo kala ahaa; Communication Officer, Legal Adviser iyo Finance Officer, ayaa waxaa u fariista 22 qof.
Xoghayaha Guddiga Doorashooyinka Puntland, Liibaan Saalax Maxamud, ayaa furitaankii qaadista Imtixaanka ka sheegay in dadkan lagu soo kala xulay araajidii ay soo dhiibteen islamarkaana loo sameeyay qaab cadaalad ah, wuxuuna intaas ku daray in boosaskan ay ahaayeen kuwo saxaafadda la galiyay oo dadkan soo codsaday loo xayaysiiyay.
Ismaaciil Cumar Ibraahim, oo ka socday hay’adda Safer-world oo Guddiga kala shaqaysa arrimaha dimuqraadiyadda, ayaa dadkii imtixaanka u fariistay ka hor sheegay in Guddiga doorashooyinka Puntland nidaamka lagu qaadayo imtixaanka u mareen qaab cadaalad ah, waliba u xil saareen hay’addan.
“Imtixaankan aan halkan ku wado ma jirto cid guddiga kamid ah oo ka war-haysa ama aragtay waxaan wado, waxaana ku ammaanayaa sida ay uga shaqeeyeen Guddoomiye Soofe iyo tiimkiisa arrintan oo runtii ah wax lagu bogaadiyo, hadii ay tan cadaalad ka sameeyeen doorashada Puntland cadaalad ayay ka samayn doonaan,” ayuu yiri Ismaaciil.
Guddoomiyaha ku-xigeenka Guddiga ahna ku simaha Guddoomiyaha TPEC, Maxamuud Soofe Xasan, ayaa tartamayaashii maanta u rajeeyay natiijo wanaagsan iyo in alle meel wanaagsan geeyo maanta 22 qof saddex ruux oo kaliga looga baahanyahay, wuxuuna intaas ku daray, in guddigu dhaxeeyo shacabka oo dhan.
“Run baan idiin sheegayaa ma arag waraaqaha uu Ismaaciil sito, qorshahana iiguma jirin inaan arko, sababtuna waxa weeye in dadka aan qaadanayno cadaalad ku soo baxaan, waayo hadii caddaalad la waayo, allena waa noo jeedaa waana ku halaagsamaynaa,” ayuu yiri Soofe oo ka mahadceliyay dedaalka dhalinyarada ay ugu jiraan sidii ay u tijaabin lahaayeen aqoonta iyo cilmiga ay barteen.
Imtixaankan ayaa kusoo beegmaya xilli guddigu uu ku gudo jiro sidii uu u ballaarin lahaa shaqada uu u hayo shacabka islamarkaana loo hirgalin lahaa nidaamka dimuqraadiyadda Puntland.